date_range 20 March 2017
visibility 4210 Views
Huawei ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ MWC 2017 ပွဲမှာ Huawei P10 နဲ့ P10 Plus စမတ်ဖုန်းတွေကို မိတ်ဆက်သွားတာ မှတ်မိကြမှာပါ။
P10 ဖုန်းက အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၇၀၀ ခန့်ရှိပြီး၊ P10 Plus ဖုန်းကတော့ ဒေါ်လာ ၈၅၀ လောက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Huawei ဟာ ထုံးစံအတိုင်း အဆိုပါ Flagship ဖုန်းတွေလောက် စျေးမကြီးတဲ့ Lite ဗားရှင်း P10 Lite ကို UK မှာ ထပ်မံမိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။
P10 Lite ရဲ့ စျေးနှုန်းက စတာလင်ပေါင် ၂၉၉ ( ၃၇၀ ဒေါ်လာဝန်းကျင်) သာ ရှိတာကြောင့် P10 နဲ့ P10 Plus တို့ထက် စျေးတော်တော်သက်သာပေမယ့်၊ Lite မော်ဒယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ဒီဇိုင်းပိုင်းကော စွမ်းဆောင်ရည်ပါ တော်တော်လေး ကွာခြားသွားပါတယ်။
P10 နဲ့ P10 Plus မှာ လက်ဗွေရာဆန်ဆာက Home button မှာဖြစ်ပေမယ့်၊ Budget ဖုန်းဖြစ်တဲ့ P10 Lite မှာတော့ လက်ဗွေရာဆန်ဆာက ဖုန်းကျောဘက်ကို ရောက်ရှိသွားတာက အဓိကပြောင်းလဲမှုပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ Leica ကင်မရာတွေကို P10 Lite မှာ တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာလည်း Kirin 960 Processor အစား၊ 2.15GHz Kirin 658 ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုထားဿလို၊ GPU ကလည်း Mali-T830MP2 GPU ဖြစ်သွားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အကျယ်ကတော့ P 10 နဲ့ သိပ်မကွာဘဲ၊ ၅.၂ လက်မအကျယ် full-HD 2.5D Curved Glass နဲ့ ပါ။
P10 Lite မှာ RAM 4GB ပါဝင်မှာ၊ Android 7.0 Nougat အခြေခံ EMUI 5.1 ကို အသုံးပြုနိုင်မှာတို့ကတော့ ကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေလို့ ဆိုရမှာပါ။ Storage အနေနဲ့ 32 GB ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး၊ microSD ကတ်က 128 GB အထိ ထပ်စိုက်လို့ ရပါတယ်။ ( P10 က 256GB အထိ ထပ်စိုက်နိုင်ပါတယ်။)
တန်ဖိုးသင့်ဖုန်းစာရင်းထဲ ရောက်သွားတာကြောင့် Leica တံဆိပ်ကင်မရာတွေကို P10 Lite မှာ တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘဲ၊ 12-MP ကျောကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ 8MP ရှေ့ကင်မရာတို့ သာ ပါရှိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် P10 Lite မှာ “Bokeh Effects” ပုံစံရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ Portrait Selfie mode တော့ ပါဝင်ပါသေးတယ်။
P10 Lite မှာ dual-SIM နှစ်ကတ်ထိုးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့်၊ Hybrid ဖြစ်တာကြောင့် micro-SD ကတ် တစ်ကတ်ထိုးထားရင် SIM တစ်ကတ်ပဲ ရမှာပါ။ 4G LTE ၊ Wi-Fi 802.11ac ၊ Bluetooth 4.1 ၊ GPS ၊ NFC စတဲ့ Connectivity တွေ အကုန်ပါဝင်ပါတယ်။ ဘက်ထရီကတော့ 3000mAh ဖြစ်ပါတယ်။
ယခု P10 Lite ဖုန်းကို Carphone Warehoue ၊ EE နဲ့ Vodafone တို့ကနေ Pre-Order မှာယူနိုင်ပြီဖြစ်ကာ၊ မတ်လကုန် ၃၁ ရက်နေ့ကနေ စတင်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Gadgets NDTV GSM Arena
Google Assistant ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘာတွေ အသုံးဝင်လဲ?
Huawei Huawei P10 Android Nougat Android Smartphones Huawei P10 Lite